Bittaa fi gurgurtaa lagachuun diina cabsuuf nu dandeessisaa Saphaloo Kadiir irraa…
August 21, 2017 / jibril ebrahim	/ Leave a comment
Saphaloo Kadiir irraa… waa’ee lagannaa bittaaf gurgurtaa kana irratti barruu qeerroo fii qaroo sabaa dubbisaa…
BITIIF GURGURII LAGACHUUN HUMNA DIINA CABSUU NU DANDEESSISA.
Sababni guddaan oromoon oomishuu malee irraa gammaddee hin beekneef tarsiimoo misoomaaf mootummaan wayyaanee baase kanaatu akka oromoon barayyu diinagdeen gad caphuu malee taakkuu takka ol hin siqnetti wixineeffamee jira. Wayyaaneen yaad rimee dinagidee “zero sum game economic theory” karoorse waggoota 25 keessatti dhawaatan hojiirra olaa dhufee waytii amma humna dinagidee saba Tigree cimisee jira.
Yaadni kun oromoo, sabaafi ummataa biraa dhaawaatan hiyyoomsee sanyii Tigree duroomisuuf kan kaayyeefate tahuu isaa fakkeenyi ijoon, warshaalee gurguddoon Tigraay keessatti hundeefamanii jiraachuu dha. Daandiin baaburaa Maqalee – Kombolchaan naanna’ee gara Jibuutiitti fullaa’uus kanaaf ragaadha.
Oromoon lafasaarra ari’amee hiyyummaa hamaa keessa seenee waardiyaa ta’ee biyya abbaa isaa keessatti akka saree mooraa alagaa eegaa jira. Yeroo ammaa ilmaan Oromoo mirga isaa gaafannaan, amma booda lafa tiyya irraa hin buqqa’u jedhee dinnaan wayyaaneen qawwee diinagdee keenyaan horattetti fayyadamuun yakka duguuggaa sanyii nurratti raawwachaa jirti. Kanaaf duula lagannaa bitiif gurgurii guutuu Oromiyaa keessatti torbaan tokkoof walitti aansinee gabaa lagachuun diinagdee wayyaaneen murruq nuun godhaa jirtuufi humna ittiin ummata cunqursu kana laamshessuun ol’aantummaa diinagdee ummanni Tigree nurratti qabaachuuf wixifatan kana hidha kutuuf nu fayyada. Kun faaydaa guddaafi ijoodha.
5) Adeemsa daldala Tigree gufachiisa.:
Lagni Lafaaf malee lafeef daangaa miti!!!
LAGNI LAFAAF MALEE LAFEEF DAANGAA MITII.!
Nagaan dubbii eegallaa
balleessuuf aaraaf jibbaa
Lammiin koo keessa beektan
seenaa woggoota dhibbaa
harka fuunee ashamaa
worra afrikaa kibbaa.!
Yoo bubbeen woliin maku
ajaan qilleensi fuudhu
urgaa duukaa bubbisaa ,
Dubbachuus dhiisee turee
dirqamnaan afaan bahe
guyyaan duudaa dubbisaa,,
Akka irreen hin kaane
oromoon woliif nahee
Akka isaaf mijjaahuuf
worraan gargarii bahee
alagaan mala dhahee
hin caldhisnu nu gahee.!
Gufuun miila rukutee
ija boohichaaf geessaa
Worri diinni duguugu
fottoqsee saba keessaa
Mee eenyu haa ilaalluu
galmee seenaa kaleessaa?
Inni diinni murteesseef
diinummaa bifa addaa
Worra dhiigaan simatu
guyyaa oromoof gaddaa ,
Worra qalama dhiigaa
saba tiksuuf qopheesse
Worra oromoof jecha
diinni lafee bobeesse .
Worra diinni dadhabee
jiraa biyyeetti galche
worra boollaayyuu lolee
gurra diinaa alanche.
Worra hojjachuu malee
bahee uf faarsee hin beekne
Worra tumsa sabaatiif
booda uf aansuu hin beekne.
Worra yoo lammiin iyye
rakkoo maatii hin himannee
Worra dafqa sabaatiin
karabaatii hin bitanne,
worra hin fafakkeessinee
Cal ta’ee dhuma malee
worra diina hin dheessinee
kanaaf siidaa eenyummaa
Diinnilleen wol gaafatee
yoom oromoon na dheessaa
Galmee keenya dubbise
seenaa hardhaaf kaleessaa ,
Dabareen fixa jedhee
lafa gootaaf gameessaa
worra bahaa cokate
oromoo cufa keessaa.
Worri sabaaf uf keennee
dhiiga obaase biyyee
Roorroon ibiddaa marsee
lammii baldhaatti iyyee
Maal jetturee oromoo
kunoo xiyya diinaattu
worra akkasiitti xiyyee?
Sabni tokkummaa qabu
shira kamuu miliqaa
Jalaa hin siqnu
Alagaan namuma faana siqaa
hin dagatin oromoo
harki marroo woldhiqaa .
Dhala oromoo taanee
osoo firaaf rifannuu
Yoo lubbuu gumaachuuf
bira hin jirruu himannuu,
duubas hin harkifannuu
Yaadaaf diinagdee qabnuun
iyyata haa simannuu
waan qabnu hargufanna
homaas hin hanbifannuu.
Oromoo biyyaa silaa
deebisaa irraa hin dhabuu
Shakii malee awwaata
lammiin wolmalee hin qabuu
Geerraree woliif lola
diina jalaas hin dabuu ,
Dhiigni keenna haa jigu
lafeen keenna haa cabuu
galata nurraa qabuu
Oromoon bahaa qofti
kophaa diinaaf hin cabuu
ergaan si haa dhaqqabuu
Akka jedhan hin shakkin
isaan tokkummaa qabuu.
Murni diiggaa fedhu
Kutaadhaan nu yaamnaan
fardaan hin fe’anii?
Diina haa garsiifnuu
humna keenna gitii
Iddoo jirtuun ka’ii
lubbuu sabaa biti
LAGNI LAFAAF MALEE
LAFEEF DAANGAA MITII.
Waloon Kamaal Aloo Gr
Seenaa Gabaabaa koloneel H/Aadam Jiloo
August 20, 2017 / jibril ebrahim	/ Leave a comment
SEENAA GABAABAA KOLONEL HAAJ ADAAM JILOO.
Korneel Adam Jilloo Weebo. Abbaa isaanii Jilloo Weeboo Turree fi Haadha isaani Tukkee Roobile Bulbul irraa bara 1917-ti anaa Maddaa waalaabu Godina Baalee Biyyaa Oromiyaati dhalate. Gadaa ijoolluummaa isaatis qananii fi kunuunsa haadha fi Abbaa argachaa naannoo dhaloota isaa Maddaa walaabuuti guddaate. Adam Jilloo haadha warraa adda addaa irraa ijoollee argataniif ijoollee ilmaan isaanii akkasumaas ilmaan ilmaan isaan ( ijoollee akaakayyooni dhalte ) kan isaan abaabayyuu ta’aniif dabalatee maatii 209 horan.
Bara xaaliyaan Biyyaa teennaa weerarte (1935tti) Adam Jilloo dardaara ganna kudha saddetittii ture dardaara cimaa hamtuu fi toltuu xiinxalee adda baafatu dandayyuu waan taheef garaagarummaa bulchiinsa kolonii warraa adiitii fi kolonii warraa gurraacha habashaa jidduu jirtu haalan hubaatan.
Korneel Habashaa gadhee fi duubati hafaa qarooma kan diigee dukkaana nama dhaalchisu akka tahee qajeellooti hubate akkasumaas akka isaan ummaata oromoo lafa isaani irraa dhabamsiisan Abbaa biyyaa oromoo tahuu fedhanif fi qabenyaa oromoo hundaa Abbaa ittii tahaani ilmaan oromoo lafaa isaani irraati gabroofattuu barbaadan hubaatan.
Mootummaan H/ Sillaase gargaarsa Ingiliiziin bakkatti gaafa deebiteerraa eegalee wayyiini bara shanan bulchiinsa Xaliyaani keeysa argame ni hafe cunqursaa fi roorroon ummata oromoora gayuun daranuu hammaacha dhufte. Booddee Oromoo lafarraa buqqiisani Amaara irraa qubsiisuu fi dhaalchisuuf saganteeffatanii hojiirra oolchuu eegalan.
Oromoo lafa ofii irrati hafaan gabroofattuu mirgaa abba biyyuuma dhowwaachu eegalan.
Haali Kuni dhaloota qabsoo Bilisuuma ummaata Oromoo tan Baaleetif sababaa tahee bara 1963 keeysa ummaanii Baalee qabsoo qaanqe bilisuuma murteefatanii Lolaa mootummaa Gabroofata H/ sillaaseti qabsoo eegalan Mohamed Gadaa Qalluura baruun.
Bara 1963 ummaanii oromoo kan nannoo Maddaa walabuu fi nageelee Boraana jiran koraa godhaatani, qabsoo mootummaa Habashaarrati adeemsisuuf, mirga Abbaa biyyummaa falmaachuuf murteffaatan yeroo duraatif ummaani oromoo qabsoo hidhaano warraanatif Jarmaayyaa siyaasa jalqabaan.
Walgahii kanarraati Janeraal Waaqoo Guutuu Dura ta’aa tahuun, Korneel Adam Jilloo ittii anaa waraanaa fi Jarmaayyaa tahuun filamaan.
Sana booda, soomaale dhaqaani meesha waraanaa gargaarsa gaafachuf ykn. kadhaatuf namoota (4 afur) namooni 4 afran Janaral Waaqoo Guutuu, Hussein Harcuuma, Kadir Waaqoo, Abdullahi Usman Guutuu. gara biyyaa somaaleti ergaatan Janaraal Waaqoo Guutu wajjiin.
Hidhaano waraanaa argaatanii gara baaleeti debbi’anii qabsoo qaanqe bilisuuma ykn diddaa gabrummaa mootummaa irrati jalqabun mootummaa gabroofata Habashaarrati Lolaa banan. Qawween Adaam Jilloofaan gaafas Somaliyaarraa argaatan (Dhombir jedhamti) lollii hidhaannoo bara sun baaleeti jalqabaame Lolaa gaafa dhombiir jechuudhaan arraalee seenaan yaadatama yaroo maraa himaama jira akka kanan bara 1963 irraa jalqabee hanga bara 1970ttii Korneel Adam Jilloo ittii anaa Ajajaa waraanaa ta’anii qabsoo qaanqe Bilisuuma hidhaannoo Oromoo hoggaana turan.
Ibsa ejjannoo aktivistoota Oromoo.
August 15, 2017 / jibril ebrahim	/ Leave a comment
Ibsa Ejjannoo Woltajjii Aktivistoota Oromoo irraa Kenname==========================================
Hageyya 9, 2017
Nuti Aktivistoonni (Rogeeyyiin) Oromoo haala yeroo ammaa Oromiyaan keessa jirtu erga mari’annee fi xiinxalleen duuba ibsa armaan gadii kana baafnee jirra.
Sabni Oromoo nagaa, bilisummaa fi badhaadhinna barbaada. Haa ta’u malee sabni kun erga sirna abbaa irree jalatti kufee jalqabee jiruu fi jireenyi isaa hubameera, nagaan isaa boora’eera. Akkuma saba cunqursaa jala jiru kamiyyuu nagaa hin qabu. Uummatni keenya sirni gabroomfataa abbaa irree EPRDF/TPLFn gaggeeffamuun ajjeefamaa saamamaa jiraachuu ifaa dha. Yeroo ammaa, uummanni keenyaa qee’ee isaa irraa humnaan buqqifamee biyya ofii dhabaa jira. Hoggantoonni Oromoo mana hidhaatti dararamaa jiru. Barattootni Oromooi eebbifaman hojii dhabuudaan miidhaa hamaaf saaxilamaniiru. Akkuma Oromoon hiyyoome, aangawoonni TPLF taayitaa fi qabeenya Oroomoo saamanii duroomaniiru. Oromoon lafaa fi biyya isaa irratti tuffatamee jireenya gadadoo jiraachuuf dirqame.
Dhiibbaa fi dhiittaan mirgaa saba keenyaa yeroo kamuu caalaa hammaachaa dhufeera. Jijjiirama itti aanu keessatti uummanni keenyaa gulantaa malu argachuuf, mormiin amma gaggeeffamu kun haalaan qindaa’uu barbaachisaa dha. Uummanni keenya nagaa dhabee, haqa dhabee, seeran ala ajjeeffamee, gar-male hidhamee osoo dararamuu bilisummaa isaaf mormii gaggeessuu qofa osoo hintaane, falmaa sadarkaa itti aanuuf of qopheessuu qaba.
Kanumarratti hundaa’uudhaan, sabni keenna mootummaa abbaa irree nagaa isaa booressaa jiru karaa danda’e maraan dura dhaabbatee falmatee nagaa isaa akka mirkaneeffatuu fi bilisummaa humnaan saamame tooftaalee barbaachisoo maratti dhimma bahuudhaan tokkummaadhaan akka gonfatu waamicha taasifna! Sochii kana galmaan gahuudhaaf gaafiiwwan keenna akkaataa ciminnaa fi ariifachiisummaa isaanii xiinxallee kanneen armaan gadii irratti ciminnaan akka itti deemamu jenneerra.
1. Sochiin amma jalqabe “HOGGANTOTA KFO FI HIDHAMTOONNI SIYAASAA MARTINUU HAAL DUREE TOKKO MALEE AKKA HIIKAMAN” kan sabni keenna gaafate hanga deebii argatutti sabni keenna woliif birmatee tokkummaadhaan akka gaggeessu waamicha taasifna.
2. Ajjeechaa fi dhiittaa mirga namoomaa baroota darban keessaa Ebla bara 2014 irraa eegalee raawwatame qaama wolabaa kan akka United Nations, European Union, African Union fi kkf haa qoratamu. QONDAALONNI ITIYOOPHIYAA UUMMATA KENYA JUMLAAN AJJEESSAN QORATAMANII SEERATTI HAA DHIYAATAN.!”
3. Gibiraa fi gidiraan humnaan olii kan saba keennarratti fe’ame hatattamaan kaafamee gibirri galii fi humna/dandeettii daldaltootaatiin wol madaalu haa diriirfamu.
4. DAANGAAN OROMIYAA HAA KABAJAMU! Mootummaan Woyyaanee gocha Oromoo sboota ollaa isaa kan nagaan woliin jiraatuun wolitta buusuu kana hatattamaan dhaabuu qaba.
Gaaffiiwwan saba keennaa baay’een jiraachuu beeknus gaafiiwwan armaan olitti eeraman ammatti sagalee tokkoon gaafatamuun bu’aa guddaa qabaachuu amanneerra. Kanaafuu, qeerroon teenna diddaa amma gaggeeffamu keessatti gaafiiwwan sadan kana gaaffii mata-duree godhachuudhaan mormii akka itti fufu yoo ta’u, fuulduraaafis uummati keenyaa falmaa olaanaaf qorqalbii isaa akka qopheessu gaafanna. Oromoon bitaa mirgaa, kan alaa fi keessaa hundumtuu qeerroo Oromiyaa cinaa dhaabbatee haqaa fi dhugaa isaa akka falmatu waamicha dhiyeessina.
Mormii gaggeeffamu ilaalchisee yaada aktivistootaa sadarkaa sadarkaan kan isiniif dhiheessinu ta’uu gamanumaan beeksifna.
Injifannoon kan uummata baladhaa ti.
Waltajjii Aktivistoota Oromoo
Hagayya 9, 2017
Prominent opposition leader Bekele Gerba denied bail
August 10, 2017 / jibril ebrahim	/ Leave a comment
Addis Abeba, August 10/2017 – A panel of three judges at the Federal High Court 4th criminal bench have today passed a decision denying the request for bail submitted by Bekele Gerba, (pictured), first secretary general of the opposition Oromo Federalist Congress (OFC).
The decision came after the judges have failed to respond during the previous four trials that followed the court’s July 13 decision to reduce the terrorism charges against Bekele Gerba to criminal charges.
In today’s hearing the judges have said that they accepted prosecutor’s argument that if released Bekele would get “involved in acts of inciting violence.”
The decision was unexpected to many in the court compound and to Bekele himself. “Truth be told, I was not expecting this; I held onto some hope that the justice system would work but it didn’t go as I expected it today; maybe some time in the future…” a calm and composed Bekele said upon hearing the verdict.
On July 13, the court ruled that Bekele Gerba, who was first detained in December 2015 shortly after the start of the popular Oromo Protests, should defend not the terrorism charges he was originally accused of, but article 257/A of the 2004 Criminal Code.
Under the reduced charges Bekele Gerba faces accusations of “Violence against the national state”, which includes, among others, “outrage against the constitution, obstruction of the exercise of constitutional powers, and armed rising and civil war.”
Bekele Gerba was charged in April 2016 along with 21 defendants that included defendants Dejene Fita Geleta, Secretary General of OFC, and Gurmesa Ayano, another senior member, with various articles of the ATP. The charges included, but not limited to, alleged membership of the banned Oromo Liberation Front (OLF), public incitement, encouraging violence, as well as causing the death of innocent civilians and property destructions in cities such as Ambo and Adama, 120km west and 100km east of Addis Abeba, during the recent Oromo protests in Ethiopia.
In its verdict on July 13, the court acquitted five of the 22 defendants, reduced the terrorism charge against Bekele Gerba to criminal charges, and ordered the remaining 16 to defend the terrorism charges brought by the federal prosecutors.
The court adjourned to hear defense witnesses of Bekele Gerba and the 16 from August 14 – 18, 2017. AS
Humiliating Oromo leaders continued!!
August 10, 2017 / jibril ebrahim	/ 1 Comment
Humiliating the Oromo leaders continued. Last time they cuffed Dr. Merera’s hand to his back, today they cuffed Bekele this way! We oppose any act against of humilation. Respect human dignity. Degrading treatment or punishment is prohibited under Article 18 (1) of the FDRE Constitution.
ባለፈው ፕ/ር መረራን በሰንሰለት አስረው ፍርድ ቤት አቀረቡ አሁን ደግሞ ኦቦ በቀለ ገርባን፣ በጣም ያሳዝናል። እንዲህ የጭካኔ እና አሳፋሪ ድርጊት ባደረጋችሁ ቁጥር ህዝቡን በራሳችሁ ላይ ጠላት እያደረጋችሁ መሆኑን አትዘንጉ።
Obbo Araarsaa Sibiluu ykn Abbaa Mirkanee eenyuu…?
August 8, 2017 / jibril ebrahim	/ Leave a comment
“Obbo Araarsaa sibiluu ummata oromoo biratti ABBAA BOKKUU akkasumas ABBAA MIRKANE jedhamani waamamu,Duudhaa Abbootii isaanirraa fudhatani fi Ayyaantuummaa isaanii fayyadamun Lammi isaani ija wal jaamse,wal ajjeesee fi k.k.f Hikun Araara busaa turan! Wal dhabde namoota jiddutti umamaa turef Gumaa murun,wal dhabde Manni murtii motummaa hikuu hin dandenye hedduu Ayyaantummaa fi gootummaa isaanii fayyadamun maanguddoo Araara busaa turani dha.ummatni Anaa Amboo fi anaa dandii hedduun Mana murtii Ammayyaa demurra Qe’ee Obbo Araarsaa sibiluu filannoo isaanii jalqabaa godhu.
Gumaan Obbo Araarsaa sibiluutin murame fudhatama dhabe hin beeku,
Hanga Dadhabani Lubbuun boqotanitti Namni yoo luubbuu dabarse Qe’ee isaanitti dhense haarka kennachuun dayeeffata.
Guyyaa awwalcha isaanii fardeen 10,000tti tilmaaman Gandoota Anaa dandi anaa amboo fi gara garaa walitti ba’un,Akkasumas Agarsisa gootummaa isaaniif Rasaasa samitti dhukaasaa olun,Sidaa Gooticha waliin ta’ani Waraana DARGII loolaa turan Obbo Zawugaa Booji’aa Cinaatti Awwaalamaniru!
Ummatni oromoo marti seenaa kana beeku qaba!!!”
Barruu Taayye Danda’aa fi Dr Milkeessaa Miidhagaa irratti…
Barruu obboleeyyan kiyya Taayyee Danda’aa fi Dr Milkeessaa Miidhagaa mormii addaan ciccitaa godhamaa jiru irratti kataban dubbiseera. Yaaddoon isaanii naaf gala, sirriidhasi. Mormiin bifa qindaawaafi tarsiimoo hordofeen geggeeffamuun barbaachisaadha.
Garuu: sababbiin ummanni tasgabbaa’uu didee fincila itti fufeef waan qaamni biyya alaa waamicha godheef natti hin fakkaatu. Shira Wayyaaneen ummata dadhabsiisuuf gootuudha jehanii shakkuunis naaf gala. Sunis fincila kanaaf sababa natti hin fakkaatu. Ummanni keenya qabsoo waggoota dheeraa keessatti muuxannoo kuufamaa uummatee jira. Laaftutti waamicha biyyaa alaa ykn shira diinaatin waan sobamu natti hin fakkaatu. Akka xiinxala kiyyaatti ummata rakkoo inni keessa jirutu, kan mootummaanis furuu dide boqonnaa dhoowee fincilsiisaa jira. Rakkoolee kana keessaa:
+ Dargaggeessi harki guddaan hojii hin qabu. Barattoota Waggoota lamaan dabran kana eebbifaman keesssa kan hojii argatan 20% hin caalan. Harki 80% waggoota hedduuf baratee hojii malee qe’etti galee cinqamaa jira. Kana furuuf waadaan hamma gaara Cilaaloo gahu kan Lammaan dubbataa ture cilee bishaan seente ta’ee jira. Abdiin Lammaa fa’arra kaayames saffisaan hurrii saafayaa ta’aa jirti. Kanaaf ummanni falli qabnu qabsoodha jechaa jira.
+ Ummanni waliigalattuu rakkoo diinaggee guddaa keessa jira. Daladalaan bara dheengaddaa hin dalaganne. Barana gibira humnaa olitti itti fe’ame. Kasaaraa guddaan itti aggaamamee waan jiruun cinqii guddoo keessa galeera. Bara dabre biyyattiin hoongee hamaan dhawamtee ture. Kanaanis omishin qonnaan bulaa hedduu gadi bu’aa ture. Garuu idaan xaa’oo itti dabale malee hin hirdhanne. Qonnaan bulaan ilmaan isaa waan nyaachisu dhabee idaa irratti tuulameen ukkaamfamee cinqii keessa jira. Caamni bara dabree ummata horsiisee bulaa jalaa beellada murruq godhee jira. Kanaaf waan elmatuufi bobbaafatu dhabee cinqamaa jira horsiisee bulaan.
+ Ilmaan Oromoo bara dabre hidhaman kumaatamaan ammas mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Kan federaalaa osoo hin dabalatiin aangoo naannoo Oromiyaa ( regional jurisdiction) jala hidhamtoota 20,000 oltu qabamee dhaddacha hatattamaa 11 dhaabbateen laalamaa jira. Kan federaala jala jirus darani. Kanaaf ummannii ilmaan isaa badii tokko malee guuramanii hidhaa jiran osoo gad hin lakkifamin tasgabbaa’uu hin danda’u. Ilmaanfi hogganoota naaf qabsaa’an hidhatti osoo shamanuu ani galee harka maradhee hin taa’u jechaa jira.
+ Yakkamtoonni mootummaa bara dabre ummata nagayaan mirga isaa gaafachaa ture ajjeesaa turan seeraan dhiyaatanii hin adabamne. Inumaatuu aangoo gaafas qabanirratti dabalameefi aanaa takkaa godina biratti jijjiramanii hojjachaa jiru. Fakkeenyaaf namichi Masalaatti nama 20 ol bakka takkatti ajjeeachise Cirotti aangoo guddaan kennameefi jira. Mootummaan jara kana adabuu dhabuun ummanni akka murtii isaa fudhatu godhaa jira. Tarkaanfiin yakkaamtoota akkasii irratti Awwadaay, Dambi Doolloo fi magaalota Shawaa Lixaafi Kibba Lixaa keessatti fudhatame kanaaf ragaadha. Waan itti fufus fakkaata.
+ Gaafin ummanni kaase takkaa deebii argachaa hin jiran ykn lafarra harkifataa jiru. Dhimma qubee ni sirreessina haa jedhan malee achuman cal jedhameera. Dhimma Wixinee Finfinnee irratti mariin ni godhama jedhame achumaan hafe. Warra magaalaa Finfinnee qofatu mari’achaa jira. Isaanuu dokumantiidhuma ummanni Oromoo dide san irratti haasayaa jiran. Ummanni Oromiyaa, Caffeen, hayyoonnifi qaamonni bira marii sirnaa tokkos godhuu hin eegalle. Weerarri Wayyaaneen naannolee ollaa keessaan bante araraan furame jedhamus weerarrifi ajjeechaan hin dhaabanne. Walloon, Gujiifi Harargeen ammas dhiiga nama keenyaa jigsuun, lafa qabachuufi loon saamuun akkuma itti fufetti jira. Aanaa Cinaaqsan irraa araddaaleen 7 officially murmanii naannoo Soomaleetif kennamanii jiran.
+ Oromoon har’as sirna Wayyaanee kan ol’aantummaan saba tokkoo itti dagaage, kan qabeenyi Oromoo saamamu, namni isaa guyyaa cufa ajjeefamu keessa akka jiru irraanfachuu hin qabnu. Ummannis tana sirritti beeka. Gaafilee waltajjiilee Gincii, Sulultaa, Amboofi bakkeen biroo irratti yaada manguddoo-dardarri kaasaa ture yoo dhaggeeffane kuni ifa.
Walumaagalatti ummanni keenya finciluuf sababa gahaa qaba; tasgabbaa’ee taa’uuf ammoo wabii homaatuu dhabee jira. Ummanni keenya mootummaa sanirraa furmaata akka hin arganne jala muree jira. Wayyaaneen furmaata laachuuf fedhii hin qabdu, OPDOn ammoo humna hin qabdu. Kanaaf ummata kanaan hin fincilinii hamma takkaa OPDOn humna horattutti baaftutti ykn warri mormitootaa hoggansaafi tarsiimoon as bayanii usii taa’i jechuun sirrii miti. Yoo jenneenis nurraa hin fudhatu. Kana qabatamaan agarree jira.
Kanaafuu falli jiruufi gaheen aktivistootaa kan ta’uu qabu waan dandeenyun ummata falmataa jiru kana bira dhaabbachuudha. Mormiin ciccitaa ta’uun hafee biyya guutuu akka ta’u qindeessuu, tooftaalee gaaga’ama xiqqeessan ( risk minimizing tactics) kan garuu mootummaa irratti dhibbaa jabaa qabu akka fayyadaman gorsuudha. Wannin jechutti jiru, ummataan hin qabsaa’inaa jechuu osoo hin taane, akkaataa qabsoon isaanii bu’aa barbaachisu argamsiisuu danda’urratti bira haa dhaabbannu.
Abdii Qopheen eenyu,meeqa keennatu yaadataa???
August 3, 2017 / jibril ebrahim	/ Leave a comment
hayyuun Oromoo Abdii qophee bara 1939oromiyaa bahaa Harargee aanaa dadaritti
dhalatee guddate. Maqaan Abdi kan warri
baaseef Abdulwahab Mahammad Yusuf
hogaa tahu Jalalarraa gabaabsani Abdi
jedhaniin. Qophee kan mogga’eef ammoo
yeroo muummee barnoota seenaa waggaa
2ffaa baratu sababa motumma HS irratti
fincila kaaftan jechuun yunvarsiitii
finfinnerraa ari’amee, Abbubaka muusaa
waliin raadiyoo hararitti koontiraatan
qacaramuun qophii afaan oromoon
qopheessu eegalanitti uummanni maqaa
masoo kana moggaaseef. Kunis qophii afaan
oromoo jechuun somaliyaarra darbaa turen
ummata haamlessaa abdii itti horaa waan
tureefi. Abdiin yero dirree dhawaa turettis
motummaa Dargiin hidhamaa gidirfamaa
ture. Yeroo hidhaa bahettis hidhaa dhaabbii
olii gadi socho’uu namootatti dabalamuu hin
dandeenye. Yerosittiis manatti ol deebi’e
walaloo sirbaa barreesutti taa’e. walaloo
sirba yeroosii hireen tiyya jalloon
wanahuudessittee kararratti buutee guyya
tokko hinqajeeltu jechun carrasaa hifata
takka ammo ummataaf jiraachuusa kanatti
boonee niin boonaan hireekoo naaf caalti
ziqiyyaa jedhee of jabeessa. Abdiin sirboota
hedduu barreese. Garuu walaloon abdi walee
qofa mitti walaloon abdi falaasama,
seenaadha, siyaasa, duudhaa fii jiruu
jireenya ummata oromooti. Abdiin nama
samuu isaa keessatti yaada tokko falaasafe
deebi’e yaadauma sani wajjiin walmorku.
Abdiin nama jalala Hiidha deebi’e walaba
Fkn “gaaf tokko namite jaalalti daguuti
Dhaqeetin himadhe dhadacha heerati,
Ballama nuuf qabe Abbaan dhadachaati Naaf
isii kan moohu nuu eegaa walitti.
” Deebi’e ammas yaaduma kana akkana
jaalalti mootii mata ifiitu
Heerafi seera namaati bultu na
harka baate dhoyfachu taatu (2x) jedhe ibsa.
Takkammoo namoota yeroo harkaa qaban
nama waliin nyaatani yeroo rakko nama
gatan dugda garagalanis gaduma taa’e itti
wlalessa. Egaa abdii qopheen weellisaa,
barreessaa walaloo sirbaa, taphataa
meeshaa muuziqaa, qorataa seenaa oromoo,
mul’isaa eenyummaa oromootii. Inumaanuu
nama oromoof dhalatee oroomoof jiraatee
du’e kan seenaan isa hin dubbatamneef hin
jajamne ta’unsaa baay’ee nama gaddisiisa
goota kana. Weellistoota Oromoo guutummaa
Oromiyaa keessaa aartii oromoo guddisaa
turan cinaa gootaa seenaansaa baay’ee hin
leellifamne kanatu jira. Mee walaloo sirboota
yookin kaaseeta innii namootaaf kenne
hangan qoradhen sin yaadachisaa
1- Weellisaa Kadir Se’idiif: Kaaseeta kudhan
walaloo sirbaa barreesse kan kennee Abdii
Qopheetii (ragaan Kadir Se’idgaaffiif deebii O
TV waliin godherratti dubbate.)
2- Weellisaa Abbitoo kabbaadaaf: abbitoon
kaaseetaguutu qabatee Abdii bira deemuun
kan ofii dhiise kan abdiin qopheesse
kaaseeta tokkoo guutuu sirboota nugusuu
taammiraat irra deebi’ee sirbe hundsaa
hojjate. Sirboota kana Abdii Qophees
sirbeera yaannii koo gama keet, harraa
gessii wallaggaa, allattin dirree dawaa as
koottu asin jiraa, halkan guyyaa ciiseen
siiyada…… sirboota abdii qopheeti
3- Raayyaa Abbaa Maccaa: namni
dhugaadhaa kami akeekkadhu naa himi
4- Aalmaaz Tafarraa: kaaseeta sirbaa 10
qabdi isaan keessaa walaloo sirboota
kaaseeta 9 Abdi Qopheetu barreesse kenneef
(ragaan gaaffif deebii weellistuun kun bara
2002 ttii taasisteen kan dubbattee.
5- Halloo Daawwee: dhuunfaan kaaseeta
hedduu hojjate ragaan ishumatu naaf hime,
keessattuu sirboota gareen afur taane
hojjanne Abdii qopheeti inni utubaa baandii
arfan qal’ooti jetti yoo ibsitu. Weellistoota
oromiyaa bahaa jiran hundaafu namni in ni
hin kennine hin jiru jetti Alii Birraa fi
mahammad xawwil sirba cidh kan isaa irra
deebi’anii sirban jetti yoo dhugaa hojiisaa
6- Usmaayoo Muusaaf: usmaayoon kaaseta
6 qaba yeroo inni hidhaa bahettii walaloo
sirboota kaaseeta guutuu qopheesse
gumaata baga baatee dhangaa aartiin harka
fuudhe jeettii ibsite haati mana Wellisa Abdii
Qophee gaaffi deebii OBS waliintasiseen.
7- Aadam haruun: namni nama ani namaa
8- Qamar yuusuf: finfinnee yaa finfinnee, kan
jedhus kan ha’a huuba qoonqoo taatee
dhuga ol baasuu fii gad liqimsuun
kumaatama dhibe kana abddii qophee
finfinnee yaa finfinnee
madda burqaajennee kan waaqni nuuf kenne
an sirraa fagaachuun hin taane
yaa finfinnee. Jedhee walosaa waraqaarratti
katabe.sirba qamar magaalaa masalaa,
dagalee jiruu kiyyaa, afaan Oromoo mootii
moototaati. Jedhus isumatu kaaseeta tokko
guutuu qopheesseef garuu yeroo
weellistoonni hedduun walaloo sirbakoo
abdiitu nuuf katabe jedhan hin agarruu
rakkoon maaliif laataa deebii barbaada!
9- Ahimad kabiiraa: abdii qophee kaaseeta
10- Alii Shabboo kaaseeta lama guutuu
11- Abdii habiib sirba inni namni carraaqatu
dhiira jedhu kenneef.
12- Ibraahim baadiyyaa kaaseeta afur
13- Alii birraafis sirba gammachuun fedhii
marare, kan inni amariffan sirbufii waa malli
nu dhibee jenne bitaa mirgaa, yaa abbaa
lafaa badiikee kan jedhufaa isatu barreesse.
14- Fandishee Mul’ataatiifiis walaloo sirbaa
hedduu qopheesseefii jira
15- Hirphaa Gaanfurreefiis walaloo sirbaa
Ergaan abdii dhabee jiruu lafaarraattii
garaa lafaatan seena ohohoo haya nagaattii
hedduu naan booyiinaa yaa warra firakoo
duraan nan gargaarree nabaasuudhaaf
rakkoo…..kanas isatu barreesse
16- Adinaan Mahammad: michuu baay’een
qaba lixa biiftuutirraakan jedhuu fii
burtukaana bilcho, oduu dharaa
dhugoomsitee jarjarteetu na madeessite kan
jedhus isatu barreesse.
17- Amalmaal Abaataa fiis sirbashee afaan
oromoo shaggooyyee walaloo sirbaa
18- Eebbisaa Addunyaaf SIRBA NU
…..OROMOODHA HAA NUBEEKANI. Jedhus
walaloo kan barreesse Abdii Qopheeti.
Weellisaa abdii Qophee hireen guutteefii
aartiin oromoo ha’a ammana tarkanfachuu
ijaan arguu baatus, waa heddu gumaacheera.
Yeroo lafarra jirateetti mul’ata har’aa
qabaatee wellistoota durii oromoo fii kan
ammaa Hirphaa Gaanfurree, Daawitee
Mokkonniin sittiinaa Abbaa duulaa fi kanneen
biros mana isaa magaala finfinnee baay’ee
dhiphoo taate keessattii dawoo goda hamba
seenaa ,aadaa fii aartii oromoo ta’uun
dadhabe nuffe osoo hin jedhiin buufata ta’ee
gargaaraa ture. Abdiin weellistoota akka
kinnisa mootii argeeti Ganda inni keessa
jiraataa ture naannoo rufael San qubatan
keessummeessa barsiisaa oromoo
gamtoomsaa tokkoomsaa ture, garee
uumuunis koree qindeessanii buusii
mataasanii walitti qabachuun akka socho;an
gumaachaa karaa qabsiisaa ture.
Muktar Usmaan Hayluu kitaabaa Umar
Suleeman Aadam Haruun Ilfinesh Qannoo,
Mahammad Sheekaa Haloo Daawwee faa
kaasuu dandeenya. Yeroo namni akka
garaasaa ta’uufii diduttiis gaduma taa’ee
namni dhugaadhaa kami akeekkadhuu naaf
addaan wallaalee madaalee naan gallee
hundinuu namaa ennaa miilaan deemu hin
unkaasamalee eenyummaa keessaa gubban
eenyummaa isaa maaliin adda baafannaa
deebii naaf kennaa
jedhe waa’ee namaa kana bitaa mirgalaalee
Kuusaan aartii oromoo Abdii Qophee biyyaa
deemee biyya jarman dhaqee xiqquma turee
deebi’e garuu yeroo as deebitti jechoota inni
dubbate keessa “an biyya koon yaade
oromiyaan yaade. Oromiyaan oromoo qofa
qabdi an dugda oromootiin ijoollee kiyyaaf
qota ijoolleen koo asheeta nyaatu” jedhee
maatiitti abdii horaa ture ha’a garuu namni
ijoollesa bakka jiran garagalee ilaale hin jiru.
Kana malees sirbasaa haa cilaahuu jedhu
usmaayoof kennee fi kan qamariif kenne
Oromiyaan mootii moototaati jedhee jaalala
Oromiiyaaf qabu waloon ibse. Kana males
yeroo jarman dhaqee deebi’e “Oromiyaan
yommuu hayyun keessa deeme biyya doofaa
taati biyyuma keenya teenye obsinee biyya
keenya deeffachuu qabna’ jedhee waarra
biyya bahaniilleenittilee abdii horaa ture.
Seena kana hedduusaa haadha manaa
weellisaa Abdii qophee aadde Kimiyaa
Mahammaa irraa gaffiif deebii weellistoorraa
kan walitti qabamedha.
Waan dubbistaniif Galatooma. Fuula FB #Jiraa_Sabaa irraa arganne.
Ijji ummataa dhugaa jiru ni arga…
August 2, 2017 / jibril ebrahim	/ Leave a comment
Warri waa komii malee galata hin beeyne. Warri waa tuffii malee dalagaan hin agarsiifne. Waan kana ummanni waan quba qabu itti hin fakkaatu??!! Jabinni namaa kan beekamuun dalagaan malee taa’ani nama komachuu fi kijiba oofunii miti. Silaa Oromoon hundi waan dandayu fi ga’uumsa itti qabu dalagee yoona bakka amma jirru hin jirru turee. Yoo dandeettan ummataaf waa dalagaa yoo dadhabdan kan dalagutti hinaafu fi hamilee buusuf hin yaadina. Holola OMN irratti ooftan akka hin milkoofne beeka nama oromoo dalaguuf kutates dalagarra hin dhaabdan. Yeroon ummata waliin dhayanis darbeera saniif ragaan tajjabbii kutaa 200 ol barraaye irraa barachuu ni dandeettu silaayis waa ofduuba deebitani hin laaltan malee. Dhumarratti wantin jedhu garée OMN ummanni ni beeka garée OSA’s ni beeka ummanni. Akkanumaan holola kijibaa hin oofina. Nagaatti.